umndeni elikhulu Peugeot Boxer zaqala ukudedela Italian Automobile SEVEL emuva ngo-1994. Uqinisile kweminyaka eyisishiyagalombili Ngadlula imodeli restyled. Umhlaba wabona olusha Peugeot Boxer, ukubuyekezwa abanikazi nale moto lidlule wonke amathemba. Isici esiphawulekayo imoto entsha isibe ububanzi plastic isembozo zokuzivikela, okuyinto on ezingeni kwamasondo kuwo wonke umzimba. I-bumper ezingemuva isibe oyindilinga xaxa futhi bonnet, eyabonakala isici ayizindunduma zone phakathi, yinde. Peugeot Boxer - umphumela umsebenzi ochwepheshe yezimoto, ngubani umgomo - ukuletha ekupheleleni yonke indlela phansi nangemininingwane emincane kakhulu. Abaklami udale enamandla futhi ngesikhathi esifanayo powertrains ukonga, kahle ayicabangile zokuphepha, dala ingaphakathi ukhululekile ergonomic.
Design imoto, ngaphandle ihaba, angabizwa ngokuthi izinguquko. Boxer okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi ukhululekile iyithuluzi omkhulu kunoma isiphi isimo.
Ubude namuhla ukhiqiza cishe 50 ukushintshwa onobuhle atholakalayo ongakhetha kuzo 8 ezahlukene umthamo umzimba. Lokhu ezimotweni wezimpahla namaloli flatbed kanye namaveni wezimpahla, umgibeli ezimotweni futhi zikhululekile. Lesi sakamuva, ngasendleleni, ingxenye esihlalweni kungacinywa zibe amatafula ukhululekile, inikeza eziningi nezinye izesekeli induduzo abagibeli.
Peugeot Boxer Abaklami wakwazi ukwakha oqinile futhi amelana umonakalo mechanical kuya umzimba. It is ezenziwe ngensimbi engagqwali nge ukushuba 1.8 mm. Lokhu amandla - inzuzo esicacile izimoto alesi sigaba.
Ngaphakathi endlwaneni eyakhiwe Peugeot Boxer ezingaphezu kuka ivulekile. isihlalo Front eyenzelwe abantu abathathu, owabekwa Sibonga kungenzeka ukuba baba ukuba torpedo igiya isigwedlo ibhokisi. Nokho, leso sinyathelo, akuyona ezinye sici futhi isetshenziswa cishe zonke izimoto ekilasini yayo. Linani selilonkhe lebantfu labange-10 izihlalo ingaphakathi enikeziwe. Ngokuphathelene ukuthuthwa kwezimpahla, van angazamukela imithwalo amamitha angu-3.4 ubude kanye 2.1 - ukuphakama, 1.8 - ebanzi.
Njengoba i ukusebenza ezengeziwe imoto ukukhwezwa inzwa kuyomfica. Ngeke ukwazi umshayeli wemoto kuya ezingemuva endaweni "ufile" zone kanye ukuxwayisa kuyomfica ngokungadingekile. Sizoba enkantolo yokupaka izinzwa, kodwa akuyona imoto, futhi idivayisi edolobheni ukulayishwa ikusiza ngokushesha futhi ngokushelela ukupaka imoto. Ngaphezu kwalokho, i-bumper ekhethekile ezingemuva ukukhwezwa izinzwa ultrasonic, okuyinto amasignali azise umshayeli isithiyo lusondela. Futhi, ukusiza umshayeli enikeziwe uhlelo ABS, okuyinto ngenhlanhla kuyinto ejwayelekile on zonke izinhlobo. Ngaphezu kwalokho, kwamanye onobuhle, ngesicelo ingafakwa ASR.
Kuze kube manje, imoto, ezivame kakhulu phezu kwezihloko ezahlukene izilinganiso izingxenye esisetshenziselwa ezimotweni - Peugeot Boxer. Izibuyekezo abanikazi imoto futhi onegunya umbono uchwepheshe - lingobunye ubufakazi: enamandla, ukonga kanye nama-practical, umsizi kangcono ibhizinisi.
Audi a8 w12: amandla nokunethezeka
Sibutsetelo imoto Vaz-21108
Amadvodza, Amadodakazi Amakhosikazi: A Love Story
Isikhathi Devonian kwenkathi Paleozoic
High Castle (Lviv): indawo lapho umlando omuzi aqala